प्रविधी – Page2– Hamropati.com
Home»प्रविधी (Page 2)
By on January 21, 2018 प्रविधी
न्युयोर्क – सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले विश्वसनीय समाचारलाई मात्रै प्रवर्द्धन (बुस्ट) गर्ने भएको छ। फेसबुकका संस्थापक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्क जुकुरबर्गले न्यूज फिडमा पूर्ण विश्वसनीय समाचार स्रोतलाई प्राथमिकता दिइने घोषणा गरेका छन्। ‘जुन भरोसायोग्य छ त्यो प्रकाशनलाई प्रवर्द्धन गर्नेछौं। जो प्रकाशनमाथि उच्च रुपमा समुदायको भरोसा छैन् त्यसमा कमी आउनेछ,’ उनले भनेका छन्– ‘यो परिवर्तन न्यूज […]
काठमाडौँ। यस्तो समय आइसक्यो कि अहिलेको परिबेशमा हामी मोबाइल बिनाको जिबन कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ । दैनिक जीबनमा पानीको जति मोबाइलको आवश्यक भैरहेको छ, आजभोलि मोबाइल भएन भने मानिसलाई एक सेकेन्ड पनि बिताउन गार्हो हुन्छ । तर त्यहि मोबाइलको अत्यधिक प्रयोगले हामीलाई धेरै नै हानी पुर्याइरहेको हुन्छ । के असर गर्छ त, जान्नुहोस् : – गर्भवती हुँदा मोबाइल […]
मोबाइलमा हानिकारक एप चिनौं डिलिट गरौं
By on January 20, 2018 प्रविधी
एन्ड्रोइड फोनमा हामीले धेरै किसिमका एपहरु प्रयोग गर्छौं। यस्ता धेरै एपहरु छन् जसले मोबाइलका लागि आवश्यक फङ्सनका रुपमा काम गरे झैं लागेपनि त्यसले मोबाइललाई हानी पुर्याइरहेको हुन्छ। तपाईंको मोबाइलमा पनि यस्ता एपहरु हुन सक्छन् जसले तपाईंको मोबाइलमै भएर पनि कमान्ड सुनिरहेको हुँदैन र मनलाग्दी बिगार गर्न सक्छ। यदि तपाईंले मोबाइलमा आउने एडलाई स्किप गर्दा पनि […]
कस्ताे छ फेसबुकलार्इ टक्कर दिने सगुन !
By on January 19, 2018 प्रविधी
काठमाडौं माघ ५ । पछिल्लो समय अधिकांश सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता प्रेमि-प्रेमिका, आफन्तवा साथीसँग च्याटमा रमाउँछन्। दुईजनाबीच हुने च्याटमा अधिकांश कुरा गोप्य हुन्छन्। ती गोप्य कुरा सबै प्रकारको मेसेन्जरमा भने रेकर्ड भएर बसिरहेको हुन्छ। च्याट गर्ने दुईबीच सम्बन्ध सुमधुर रहुञ्जेल त ठीकै हुन्छ, जव सम्बन्धमा समस्या आउँछ, गोप्य भनिएका कुरा तिनै सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट हुन पुग्छ। […]
झन अप्ठायाराे बन्दै युट्यूब नियम
By on January 18, 2018 प्रविधी
माघ ३ – पैसा कमाउने उद्देश्यले युट्यूब च्यानल खोल्दै हुनुहुन्छ ? पर्खनुहोस् ! यूट्यूबले नयाँ नियम लागू गरेको छ । अब स–साना फूटेज भिडियो र सामान्य तरिकाबाट युट्यूबमा पैसा कमाउन त्यति सजिलो छैन् । रमाइला भिडियो र अर्काका भिडियो चोरेर तोडमरोड गर्दै आफ्नो बनाएर पैसा कमाउनेका लागि युट्यूब त्यति सहज छैन अब । यसले गर्दा […]
कम्प्युटरमा भाइरस पसेको कसरी थाहा पाउने ?कसरी बँच्ने ?
By on January 12, 2018 प्रमुख समाचार, प्रविधी
आदित्य कृष्ण कम्प्युटरमा भाइरस पसेको कसरी थाहा पाउने ? कसरी बँच्ने ? हामी अहिले साइबर युद्धको युगमा छौँ । तपाइँलाई थाहै नदिइकन तपाइँको कम्प्युटर भाइरसद्धारा संक्रमित हुनसक्छ र अदृश्य ठाउँबाट कुनै ह्याकरले तपाइँको कम्प्युटर नियन्त्रण गरिरहेको हुनसक्छ । तपाइँको ल्यापटपका डाटाहरु साइबर अपराधीहरुले चोर्ने खतरा पनि हुन्छ । त्यसैले आफ्नो पिसिलाई ह्याक हुनबाट वा […]
फेसबुकले हटायो यो फिचर
By on December 22, 2017 प्रविधी
फेसबकले आफ्नो प्लेटर्फममा सेयर गरिएका झूटा समाचारको छेउमा रातो संकेत चिन्ह प्रयोग गर्न छोडेको छ । यसले सोचेअनुसार काम नगरेकाले बन्द गरिएको फेसबुकको भनाइ छ । गत डिसेम्बर २०१६ मा फेसबुकले सत्यतथ्य परिक्षण गर्ने वेबसाइटले झूटो ठहर्‍याएका समाचारहरुको छेउमा रातो वार्निङ दिन सुरु गरेको थियो । यद्यपि यो प्रयोगले गहिरो विश्वासका कुराहरुलाई झनै बल […]
म्याग्दीमा पहिलो पटक मोबाइल एप्स प्रयोग गरेर डाँडामा पानी
By on December 21, 2017 प्रमुख समाचार, प्रविधी
म्याग्दी, पुस ६ । म्याग्दीमा पहिलोपटक मोबाइल एप्सको प्रयोग गरी लिफ्ट प्रविधिको सिचाइँ सञ्चालन गरिएको छ । म्याग्दी नदीको किनारमा रहेको लिफ्ट प्रविधिको सिचाइँलाई एन्ड्रोइड मोबाइलको प्रयोग गरी स्थानीय कृष्णबहादुर खत्रीले म्याग्दी नदीपारिबाट सिचाइँको कन्ट्रोल र मेकानिकल सर्किटलाई चलाएर नदीबाट २५० मिटरमाथि बेनी नगरपालिका–२, खवरामा ६३ एमएलको पाइपमार्फत पानी पुर्याएका हुन् । मोबाइलबाट सिचाइँको इनारमा […]
भारतको भन्दा नेपालको इन्टरनेट तीब्र
By on December 13, 2017 प्रविधी
काठमाडौँ, मंसिर २७ । नेपालमा मोबाइल ब्रोडब्यान्डको डाउनलोड स्पिड (क्षमता)मा सुधार आएको पाइएको छ । गएको नोभेम्बर महिनामा ओक्लाज स्पिड टेस्ट ग्लोबल इन्डेक्सले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालले सार्क राष्ट्रहरु भारत र श्रीलंकालाई उछिनेको छ । नोभेम्बरमा मोबाइल इन्टरनेटमा युरोपियन मुलुक नर्वे औषत ६२.६६ मेगाबिट्स पर सेकेन्ड (एबीपीएस) डाउनलोड स्पिडसहित सबैभन्दा अगाडि छ । फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डमा […]